हान सिङको जन्मथलो ह्वाइ-इनका केही जवानहरुले उनलाई हेला गर्नेगर्दथे। एक दिन त्यहाँको एउटा ठिटाले अग्लो जिउडाल भएको हान सिङले जहिले पनि साथमा खड्‍ग लिनेगरेको देखेर उ कातर भएका कारण यसो गरेको होला भन्ठान्यो, अनि धेरै बटुवाहरुको आवत-जावत भैरहेको बजारमा हान सिङलाई छेकेर भन्यो: "तिमी साहसी छौ भने खड्‍ग निकालेर ममाथि प्रहार गर, तिमी डरछेरुवा हौ भने मेरो टाङमुनिबाट छिरेर जाऊ।" चारैतिर तमाशा हेर्न बसिरहेका मानिसहरु सबैले यो जानी-जानी निहुँ खोजेर हान सिङको नाक काट्न खोजिएको हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका थिए। अब हेरौं, हान सिङले के गर्ला, कसो गर्ला। हान सिङले निकै बेरसम्म सोचे र त्यसपछि केही पनि नबोलिकन त्यस ठिटाको टाङमुनिबाट छिरे। यो देखेर वरिपरिका सबै मानिसहरु पेट मिची-मिची हाँस्नथाले। यो हान सिङ पक्कै पनि हिम्मतहारा मान्छे हो भन्ने कुरा उनिहरुले मनमनै सोचे। यो नै आजसम्म पनि चर्चित भइरहेको "टाङमुनिबाट छिरेर जाने अपमान" शिर्षकको कथा हो।
वास्तवमा हान सिङ एउटा निकै चतुर बुद्धि भएको व्यक्तित्व थियो। उनले तात्कालीन समाजमा राजसत्ता फेरबदल हुनलागेको अवस्थामा परिरहेको अनुभव गरेकाले आफूलाई देखाउने दिन जरुर आउनेछ भन्ने विश्वास संगालेर दत्तचित्त भएर जंगी शास्त्रको अध्ययन गर्नुका साथै लड्ने-जुध्ने शक्ति बढाउन घुँडा धसेर कसरत पनि गरिरहेका थिए। ईसा पूर्व 209 सालमा देशका विभिन्न ठाउँमा छिन राज-वंशको रजाईंविरुद्ध किसान विद्रोह मच्चिएको थियो। त्यति बेला हान सिङ पनि तीमध्येका एउटा शक्तिशाली सेनामा सहभागी भए। सो सेनाका नायक पछि अर्को राज-वंशका संस्थापक बन्न पुगेका सम्राट लिउ पाङ नै हुन्। शुरु-शुरुमा हान सिङले सेनाका लागि खाद्यान्न तथा अरु सामग्री पठाउने कामको जिम्मा लिने तल्लो दर्जाको हुद्दा भएर काम गरे। यसबाट उनि सन्तुष्ट थिएनन। पछि लिउ पाङका सल्लाहकार स्याओ हसित उनको चिनाजान भयो। ती दुबैले बेलाबखतमा समसामयिक राजनीतिक तथा सैनिक मामिला बारे छलफल पनि गर्नेगर्दथे। स्याओ हले हान सिङ एकजना योग्य व्यक्ति भएको कुरा बुझेपछि लिउ पाङ समक्ष सिफारिश गर्न निकै प्रयत्न गरे तापनि त्यति सफलता पाउन सकेनन।
हतोत्साहित भएका हान सिङले एक दिन अर्को सेनामा सेवा गर्ने विचार गरेर अरुले चाल नपाउने गरी लिउ पाङको सेना छाडे। स्याओ हले यो कुरा सुन्नासाथ लिउ पाङलाई भन्न नभ्याउँदै घोडा चढेर हान सिङलाई लखेट्न गए। लिउ पाङले खबर पाएपछि यी दुइजना भागेर गएका होलान भनेर मनमनै सोचे। तर दुइ दिनपछि स्याओ ह तथा हान सिङ फर्केर आए। लिउ पाङले चकित र हर्षित भई के भयो भनेर स्याओ हलाई सोधे। स्याओ हले "म अन्तै जानखोजेका व्यक्तिलाई हजुरका लागि फर्काउन गएको" भनेर जवाफ दिए।
लिउ पाङले त्यति बुझ्न नसकी फेरि सोधे--"पहिले त दर्जनौं रथीसथी भागिसक्दा पनि तपाईंले यसो गर्नुभएन। यो हान सिङलाई फर्काउन मात्र यस्तो दुःख गर्नुभएको किन हँ?" स्याओ हको जवाफ थियो: "पहिले भागेर गएका ती रथीसथी साधारण मानिस भएकाले त्यस्ता मानिस फेरि-फेरि पनि पाउन सजिलो हुन्छ। तर हान सिङजस्ता मानिसलाई पाउन गाह्रो हुन्छ, यो एउटा अद्भूत व्यक्तित्व हो। हजूर सबै ठाउँ आफ्नो कब्जामा पार्न चाहनुहुन्छ भने महत्वपूर्ण काम बारेमा हजूरसँग कुरा गर्नसक्ने हान सिङ वाह्यक अर्को को छ र?" लिउ पाङले भने--"त्यसो भए उनलाई रथी बनाएर तपाईंकहाँ पठाइदिउँ?" स्याओ हले फेरि जोड दिएर भने--"मलाई लाग्छ, साधारण रथी भएर यहाँ बस्न उनी मान्दैनन।"
लिउ पाङले "ल ठीक छ, त्यसो भए उनलाई महासेनानी नियुक्त गरिदिन्छु" भने। यसरी हान सिङ खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने कामको जिम्मा लिने तल्लो दर्जाको हुद्दाबाट सेनापति बन्न पुगे। पछि लिउ पाङलाई सम्पूर्ण देशको शासनसत्ता हत्याउन सहयोग गर्ने सिलसिलामा उनले हरेक लडाईंमा विजय हासिल गरी उल्लेखनीय कीर्ति स्थापित गरेका थिए।